केले ल्यायो सेयर लगानीकर्ताहरूमा उत्साह «
केले ल्यायो सेयर लगानीकर्ताहरूमा उत्साह
प्रकाशित मिति : माघ ७, २०७६ मंगलबार
नयाँ–नयाँ लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण नबनाए सेयर बजार बढ्न गाह्रो हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
गएको हप्तादेखि सेयर बजारमा चाप बढेको देखिएको छ । ब्रोकर कम्पनीहरूमा पनि लगानीकर्ताहरूको भीड देखिन थालेको छ । हेर र पर्खको अवस्थामा रहेका लगानीकर्ताहरू एकाएक बजारमा देखिन थालेका छन् । केही हप्ताअगाडि दिनमा २०–३० करोडको हाराहारीमा हुने कारोबार एक दिनमै अर्बको भएको छ ।
कतिपयको भनाइमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको समय सकिन लागेका कारण सेयर बजारमा उत्साह आएको हो । तर पनि केही दिन नेप्सेमा सुधार देखिएकोमा यसरी अनुमान लगाउन नहुने कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ । कतिपयको भनाइमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको समय सकिन लागेको भन्दा पनि पछिल्लो समयमा बैंकहरूमा तरलता सहज भएको, ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको र घरजग्गा, अटो लोनमा कडाइ गरेकाले सेयर लोनमा सहज हुने देखिएको र यस वर्ष अधिकांश कम्पनीको लाभांशमा बोनस सेयरमा भन्दा नगद लाभांशमा जोड दिएका कारण ती लाभांश पनि सेयर बजारमै आउने भएकाले अर्थात् सेयर बजारमै लगानी हुने भएकाले पनि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूमा उत्साह थपिएको हो, तर पनि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूमा अन्योलता भने हटेको छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला । तर, लगानीकर्ताहरूले सुधारको संकेत भने देखिएको छ भन्दा हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा सेयर बजार खस्किँदो अवस्थामा नै रहेको छ । विगतमा १८८१ अंक पुगेको नेप्से घटेर १२ सय अंकको हाराहारीमा छ । पछिल्लो समयमा टपका बैंकका भनिने सेयरको भाउमा गिरावट आइरहेको छ । केही वर्ष अगाडि प्रतिकित्ता रु. ३ हजारको सेयर पछिल्लो समयमा रु. ५–६ सयमा पाउन थालिएको छ । धेरैजसो हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको सेयर त आधार मूल्यभन्दा कम यानि रु. सयभन्दा कममा पाउन थालेका छन् । नयाँ लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा प्रवेश गर्न डराइरहेका छन् । घटेको भाउमा पनि सेयर किन्न डराइरहेका छन् लगानीकर्ताहरू, कतिपय अहिले पनि हेर र पर्खको अवस्थामा रहेका छन् । कतिपय लगानीकर्ताको मनोविज्ञान हेर्दा सेयरको भाउ बढिरहेका बेला सेयर किन्ने गरिरहेका छन् । केही दिनदेखि सेयर बजारमा कारोबार बढेको भए पनि अझ पनि ठूला लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा प्रवेश नगरेको, साना लगानीकर्ताहरू नै बढी सक्रिय भइरहेको कतिपय सेयर ब्रोकरहरूको भनाइ छ ।
त्यसो त कतिपय लगानीकर्ताहरू घटेको बेला किन्ने र बढेको बेला बेच्नका लागि सेयर किन्ने गरेका पनि नभएका होइनन् । यदि सेयर बजार घट्दो अवस्थामा नै छ भने पनि फेरि घट्छ कि भनेर घाटा भए पनि डराएर सेयर बिक्री गर्ने हो भने घटेको बजार बढ्न गाह्रो हुन्छ । सेयर बजार उकालो लाग्न सक्दैन भन्दा पनि फरक नपर्ला । बजारमा बिक्रीको चाप बढेपछि भाउ त्यसै पनि घट्छ । मागभन्दा आपूर्ति बढेपछि भाउ घट्नु स्वाभाविक हो । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको नियमले पनि यही भन्छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले धैर्य गर्नु सक्नुपर्छ, होल्ड गर्न सक्नेले होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ । बजार घटेको घट्यै छ, फेरि घट्छ कि भनेर आत्तिएर सेयर घाटा खाएर बेच्ने हो भने सेयर बजारर उकालो लाग्न सक्दैन र यस्तो अवस्थामा चलखेल पनि हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सेयर बजारका माहिर–माहिर खेलाडीहरूले यस्तोमा सेयर बजारमा चलखेल गरेर हल्ला गरेर सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने नेप्सेलाई तलमाथि पार्ने गरेको पनि कतिपयको भनाइ छ । यसमा भने लगानीकर्ताहरू सचेत हुनुपर्छ ।
त्यसो त कतिपय लगानीकर्ताहरूलाई भने बजार घटिरहेको अवस्थामा पनि घाटा खाएर भए पनि बेच्नुपर्ने बाध्यता पनि होला । त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर होल्ड गर्न सक्ने क्षमता भएका लगानीकर्ताहरूले होल्ड गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजारमा आपर्ति कम भए पनि माग बढ्छ र सेयर बजार स्वतः बढ्छ भन्ने हिसाबले लगानीकर्ताहरू अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
सेयर बजारमा नेप्से घटबढ भइरहन्छ । नेप्से कहिले घट्छ त कहिले बढ्छ । नेप्से घटबढ हुनु सेयर बजारको विशेषता नै हो । नेप्से घटेपछि बढ्छ पनि, नेप्से सधैं घटिरहँदैन र सधैं बढि पनि रहँदैन । नेप्से घटबढ भइरहन्छ, तर पनि कतिपय अवस्थामा भने बजार घट्ने–बढ्नेमा ठूलो ग्याप पनि हुने गरेको हुन्छ । यसमा आत्तिनुपर्ने भने हुँदैन । तर पनि नेप्से घटिरहेको छ भनेर आत्तिने, डराउने गर्नु भने हुँदैन ।
कतिपय विज्ञ, विश्लेषकहरूले सेयर बजारलाई वृत्तचक्रका रूपमा पनि लिने गरेका छन् । त्यसो त सेयर बजार घट्ने–बढ्नेमा विविध कारणहरू हुन्छन् । राजनीतिक कारण, सरकार परिवर्तन, नियामक निकायहरूको नीति, नियम, निर्देशनका कारण, मार्जिन ल्यान्डिनका कारण, बैंकको ब्याजदरका कारण, कतिपय अवस्थामा जिम्मेवार पदाधिकारिहरूको विवादास्पद तर्क, भनाइहरूका कारण, कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञानका कारण, बजारमा चल्ने हल्ला, चलखेलका कारण, बैंकमा तरलताको कारण, माग र आपर्तिको असन्तुलनका कारण, हकप्रद एफपीओ, आईपीओका कारण तथा पुँजी वृद्धिका कारण पनि सेयर बजारमा नकारात्मक–सकारात्मक असर गर्ने गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सेयर बजार निरन्तर ओरालो पनि लाग्न सक्ने पनि सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा सेयर बजार आरालो लाग्नुको कारण बजारमा सेयरको आपूर्ति बढ्नाले पनि हो भनेर धेरैले भन्ने गरेका छन् । बजारमा माग कम र आपूर्ति बढेका कारण सेयर बजार ओरालो लागेको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । सेयर बजार ओरालो लाग्दा नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि सेयर बजारमा प्रवेश गर्न डराउने अवस्था छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । अहिलेको अवस्थामा नयाँ–नयाँ लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण नबनाए सेयर बजार बढ्न गाह्रो हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । त्यसो त पछिल्लो समयमा सेयर बजार बढ्न नसक्नुको कारण बैंकको ब्याजदरलाई मान्ने गरेका पनि छन् । कतिपयले बैंकहरूको बढ्दो ब्याजदरका कारणले कतिपयको भनाइमा सेयरमा लगानी गर्न भन्दा बैंकमा राख्न फाइदा भएको भनाइ पनि छ । बैंकमा सेयर बजारमा जस्तो रिस्क पनि हुँदैन । तर, सेयरमा लगानी गर्दा जोखिम पनि हुन्छ भन्ने पनि केहीको भनाइ छ, तर ‘नो रिक्स ने गेन’ भन्ने भनाइ पनि त छ नि । सेयर बजार बढेपछि बैंकमा भन्दा बढी फाइदा सेयर बजारबाट लिन सकिने हुन्छ ।
गत वर्षदेखि सेयर निरन्तर आरालो लागिरहनुमा प्रमुख कारण आपुर्ति बढ्नाले नै हो भन्नुपर्छ । यस्तो भनाइ पनि धेरैको छ । बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले आआफ्नो पुँजी बढाउनुपरेका कारण भारी मात्रामा हकप्रद सेयरहरू जारी गरेकाले लगानीकर्ताहरूसँग थुप्रै सेयर भएका कारणले लगानीकर्ताहरू सेयर किन्नमा भन्दा पनि बिक्री गर्नमै लागेको देखिन्छ । यसले गर्दा बजारमा सेयरको मागभन्दा आपूर्ति बढी भएकाले सेयर बजार उकालो लाग्न नसकेको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । अर्कातिर बैंक ब्याजदरले पनि असर गरेको छ पनि भन्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा सुधार हुन नसकेकोमा धमाधम विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीका प्राथमिक सेयरहरू पनि निष्कासन हुने गरेको र वाणिज्य बैंकहरूले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले धमाधम ऋणपत्रहरू निष्कासन गरिरहेका कारणले पनि सेयर बजारमा सुधार हुन नसकेको कतिपय सरोकारवालाको भनाइ छ । यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि बिचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसो त दोस्रो बजारमा कतिपय हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको सेयर ८०–९० रुपियाँमा पाइरहेका छन् । यस कारणले पनि होला, पछिल्लो समयमा निष्कासन भएका हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयरमा लगानीकर्ताहरूको त्यति आकर्षण नभएको होला । पछिल्लो समयमा निष्कासन भएका हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर सबै बिक्री नभएको देखिन्छ । तर, पनि लगानीकर्ताहरू भने सचेत, चनाखो र जानकार हुन आवश्यक छ ।
पुँजीगत खर्च सुक्दै, चालू खर्च फुल्दै
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैं पुँजीगत बजेट कटौती गरी महत्वाकांक्षी समृद्धिकै सपना पाँच दलीय गठबन्धन
धान दिवस र कृषि क्षेत्रको सुधार
राष्ट्रिय धान दिवस, कृषिप्रधान देश, तर कृषि उत्पादन निरन्तर घटेको छ । सरकारले आव २०७९/०८०